एप्पल गरेको सबै उपकरणहरु आफ्नो सुविधा र सहज इन्टरफेस द्वारा प्रतिष्ठित छन्, तर तपाईं हालै आईफोन मालिक भए भने, सबै पछि, तपाईं यसको प्रयोग केही प्रश्न हुन सक्छ। एक सम्भावित समस्याहरूको: कसरी आईफोन फोटो अपलोड गर्न, साथै कसरी आफ्नो कम्प्युटर मा, आईफोन लिएको फोटोहरू बचत गर्न? यो धेरै सरल छ!
को iPhone USB मार्फत एउटा फोटो कसरी सुरक्षित गर्न
जवाफ धेरै सरल छ किनभने हामी, यो प्रश्न सुरु हुनेछ। तपाईं संग लिएको फोटोहरू बचत गर्न, तपाईं केवल आफ्नो कम्प्युटर फोन समावेश युएसबी-केबल आफ्नो आईफोन जडान गर्न आवश्यक छ। जब तपाईं पहिलो कम्प्युटर जडान स्वचालित रूपमा सबै आवश्यक चालक स्थापना गर्छ। यसबाहेक, सञ्चालन प्रणाली, Windows वा म्याक ओएस त, तपाईंको उपकरण नियमित फ्लैश कार्ड रूपमा, एउटा हटाउन सकिने डिस्क, रूप निर्धारण। खैर, त्यसपछि यसलाई सरल छ: खोल्न कम्प्युटर नयाँ ड्राइभ र देख्ने जहाँ सबै फोटो आफ्नो आईफोन छन्। तपाईं बस iPhone मा फोटो वा भिडियो प्रतिलिपि गर्न सक्नुहुन्छ, याद, तपाईं पनि "क्यामेरा रोल" फोल्डरमा छ आफ्नो फोनमा जो, साथै फोटो क्यामेरा, मा कब्जा गर्दै छन्। आफ्नो स्मार्टफोन बाट अन्य सामग्री - संगीत, चलचित्र, कागजातहरू - यसरी प्रतिलिपि गर्न!
कसरी आईफोन iCloud मार्फत फोटो सिंक गर्न
एक धेरै सुविधाजनक बाटो, तपाईं कुनै पनि कार्य आवश्यक गर्दैन, अलग, को पाठ्यक्रम, प्रारम्भिक कन्फिगरेसन - को iCloud, प्रयोग "फोटो स्ट्रीम" - एप्पल क्लाउड सेवा मार्फत तस्बिरहरू स्थानान्तरण छ। यसरी, तपाईं कम्प्युटर गर्न iPhone र फिर्ता दुवै एउटा फोटो पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो iPhone र विपरित मा फोटो अपलोड अघि, माथि उल्लेख रूपमा, ठीक यन्त्र समायोजन आवश्यक छ।
को iPhone मा "फोटो स्ट्रीम" स्थापना
आफ्नो iPhone को "फोटो स्ट्रीम" मार्फत सबै फोटाहरू स्थानान्तरण गर्न अनुमति दिन, यो सुविधा सक्रिय। यो गर्न, "सेटिङहरू" मा जानुहोस्, र त्यसपछि वस्तु iCloud पाउन। थप सेटिङ "फोटो" मा स्विच गर्नुहोस्। कृपया याद गर्नुहोस् कि फोटो तपाईं जडित हुँदा मात्र वाइफाइ फोटो स्ट्रिम सक्षम उपकरण अपलोड गरिनेछ।
कम्प्युटर मा "फोटो स्ट्रीम" स्थापना
आफ्नो कम्प्युटर Windows चलिरहेको छ भने, तपाईंले देखि एप्पल निःशुल्क अनुप्रयोग iCloud स्थापना फोटो स्ट्रिम काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। कार्यक्रम डाउनलोड र स्थापना कुनै पनि कठिनाइ उत्पन्न हुँदैन। iCloud सेट भएपछि, आफ्नै खाता एप्पल डाटा अन्तर्गत सेवा प्रविष्ट गर्नुहोस्। प्रणाली तपाईंलाई पहिचान किनभने ठीक - यो पनि iPhone मा रूपमा, एउटै एप्पल आईडी द्वारा शुरू भएको थियो महत्त्वपूर्ण छ। विन्डो मा क्लिक "फोटो" र त्यसपछि लेखिएको नजिकै एक निशान राख्न "विकल्प ..." जहाँ कम्प्युटर स्थित गरिनेछ "फोटो स्ट्रीम" निर्दिष्ट गर्नुहोस्। म्याक ओएस मा, सबै एउटै बारेमा। iCloud सेटिङहरू तपाईंको कम्प्युटरको लागि सेटिङ पाउन सकिन्छ, र त्यहाँ, छेउको वस्तु "फोटो", सम्मिलित "फोटो स्ट्रीम"। एउटा फोल्डर निर्दिष्ट गर्न सक्ने क्षमता iPhoto चालू संग फोटाहरू "फोटो स्ट्रीम" डाउनलोड गर्न भन्ने तथ्यलाई जडान मा अवस्थित छैन।
अब, कुनै कुरा यो के हो तपाईं एक आईफोन छ - आईफोन 4, 4S आईफोन5- तपाईं आफ्नो उपकरणमा कब्जा फोटो, तपाईं लगभग तुरुन्त आफ्नो कम्प्युटरमा हेर्न सक्छन्। को iPhone फोटो कसरी अपलोड गर्न? केवल "ड्रयाग र ड्रप" आफ्नो कम्प्युटर (Windows) वा iPhoto विन्डो (म्याक ओएस) मा उपयुक्त फोल्डरमा उनलाई, र तिनीहरूले चाँडै स्मार्टफोन देखिनेछन्। समान तरिका फोटो मा तपाईं आफ्नो कम्प्युटरमा फोटो मेटाउन भने, कि छ, "फोटो स्ट्रीम" बाट हटाइएका छन् नोट, त्यसपछि यसलाई गायब र आईफोनहरु हुनेछ। तपाईं यसलाई आफ्नो फोनमा बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि छवि "मेरो फोटोस्ट्रिम" फोल्डर देखि "क्यामेरा रोल" मा प्रतिलिपि। त्यसैले यसलाई आफ्नो कम्प्युटर मा छ - तपाईं यो आईफोन मा "फोटो स्ट्रीम" बाट हटाउन निर्णय भने, अर्को फोल्डरमा तस्वीर प्रतिलिपि।
iTunes को माध्यम ले आईफोन फोटो कसरी अपलोड गर्न
र अर्को तरिका हो। यसलाई तपाईँको कम्प्युटरबाट तस्बिर अपलोड गर्न मात्र उपयुक्त छ। तपाईंले पहिले नै त्यसो गर्नुभएको छैन भने, सुरु गर्न एप्पल आईट्युन्सबाट स्वतन्त्र। यो कार्यक्रम - आवश्यक आईफोन प्रयोगकर्ता सफ्टवेयर लागि सफ्टवेयर। तपाईं त्यस्ता पुस्तकहरू, फोटो, संगीत, संगीत, वालपेपर रूपमा आफ्नो उपकरण जगेडा गर्न, र यो फरक सामग्री डाउनलोड, यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब मात्र तस्वीर कुरा गरौं। कार्यक्रम आफ्नो iPhone एक जडान कम्प्युटर पाता भएपछि, यो बायाँ प्यानमा प्रर्दशन गर्दछ। फोन संग कुनै पनि हेरफेर पूरा गर्न, बायाँ माउस बटन थिचेर यो चयन गर्नुहोस्। विन्डो को केन्द्रीय भाग मा आईफोन बारेमा जानकारी को एक किसिम, साथै सामग्रीहरू प्रदर्शन कि ट्याबहरू एक नम्बरमा तुरुन्तै दृश्यात्मक हुनेछ। iPhone मा फोटो अपलोड गर्न, तपाईं "फोटो" ट्याब जान आवश्यक छ। तपाईं पहिलो जहाँ फोटो फोन संग सिंक्रोनाईजमा भण्डारण छन् तपाईँको कम्प्युटरमा फोल्डर सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईं आफ्नो iPhone मा देख्न चाहन्छु सबै प्राप्त गर्न डाउनलोड गर्नुहोस्। यस iTunes मा "फोटो" मा बक्समा चिन्ह लगाइएको टिकटिक "समन्वयन फोटो देखि ..." र समिकरण लागि फोल्डर चयन गर्नुहोस्। यदि तपाईं भिडियो अपलोड गर्ने क्षमता सहित आवश्यक छ। निर्दिष्ट फोल्डर देखि आवश्यक भएमा, तपाईँलाई व्यक्तिगत तस्बिरहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड गर्न भने iPhoto मैक ओएस, वा सबफोल्डरहरुलाई मा।
तपाईं माथि हेरफेर सबै पालन गरे पछि, कार्यक्रम तल्लो दायाँ कुनामा वा "सिङ्क" "लागू गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्, प्रक्रिया नसकेसम्म प्रतीक्षा, र तपाईं iPhone मा फोटो हेर्न सक्छन्।
को iPhone मा इन्टरनेट मार्फत फोटो कसरी अपलोड गर्न
यो iPhone मा सिधै इन्टरनेटमा कुनै पनि मनपर्ने तस्बिर वा चित्र डाउनलोड गर्न सम्भव छ। फोटो यसरी डाउनलोड, आफ्नो फोनमा "क्यामेरा रोल" मा गिरावट। लगभग 1 सेकेन्ड -, आफ्नो मनपर्ने तस्वीर बचत गर्न केवल आईफोन ब्राउजरमा यसलाई खोल्न छुन र एक समय को लागि यो पकड क्रममा। तपाईं समावेश आइटम "सुरक्षित छवि," "प्रतिलिपि" र "रद्द गर्नुहोस्" मेनु देख्नुहुनेछ। चयन गर्दा पहिलो फोटो सुरक्षित गरिनेछ।
माथिको साथै नेटवर्क प्रयोग गरेर यन्त्रहरू बीच फाइलहरू स्थानान्तरण गर्न विभिन्न "बादल" सेवा छन्। छुट्टै मुद्दा - तर यी अवसर तिनीहरूलाई प्रत्येक एक विवरण रूपमा छलफल गरिनेछ।
नयाँ ग्यालक्सी S6: विशेषताहरु, सुविधा र आफ्नो स्मार्टफोन अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी
दोहोरो क्यामेरा संग मोबाइल फोन
मोबाइल फोन सोनी एरिक्सन w810i: विशेषताहरु र disassembly लागि सुझाव
एक क्रोमोजोम के हो? क्रोमोजोममा को सेट गर्नुहोस्। क्रोमोजोममा एक जोडी
Mettyu Broderik - एक प्रतिभाशाली अभिनेता र निर्देशक। आफ्नो फिल्म
जीवित लागि मास्को को मूल्यांकन जिल्लामा: एक सिंहावलोकन, वर्णन र समीक्षा
महिला सूट थोक र घर लुगा को प्रकार
छनौट मा के राम्रो जेल नेल, सल्लाह।
र बेफाइदा "रेनो लोगान": मालिकको समीक्षा
Crested lark: फोटो र विवरण
स्तर र सामाजिक चेतना को प्रकारका
कसरी बनी आफु सुहाउदो बनाउन?
को KUBAN नदी को प्रमुख tributaries: वर्णन, नाम र प्रकृति